Ekpughewo atụmatụ niile nke Huawei Y9 Prime (2019) Gam akporosis
Kpughere atụmatụ niile nke Huawei Y9 Prime (2019) site na otu ụlọ ọrụ ahụ
El Huawei P SmartZ Ọ bụ Huawei mbụ smartphone nwere mmapụta selfie igwefoto. A hụrụ ya na weebụsaịtị nke Huawei Spain na Huawei Italia na izu gara aga, mana etinyebeghị ya maka ire ere.
Agbanyeghị, ọ bụghị naanị ekwentị igwefoto selfie sitere n'aka onye na-eme ekwentị ekwentị China. Enwere Huawei Y9 Prime (2019), na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ekwentị ahụ dị ka P Smart Z, mana yana igwefoto ọzọ dị n’azụ. Edere nke a na weebụsaịtị webụsaịtị nke Huawei, na-egosi nkọwa ya niile, anyị wee kọwaa ha n'okpuru.
Anyị kwuru na ọ na-ekenye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu nkọwa ahụ yana atụmatụ nke Huawei P Smart Z nwere. Yabụ ị ga-enweta Ngosipụta 6,59-anụ ọhịa Ultra FullView nwere mkpebi FullHD + nke 2,340 x 1,080 pikselụ na ụda olu ya abụọ n’azụ. (Mara ya: Huawei Y9 2019: Huawei n'etiti ọhụrụ)
N'ime ya bụ Kirin 750F processor, nke ejikọtara ya na 4GB RAM na 64GB nke ebe nchekwa dị n'ime.
N'adịghị ka P Smart Z, ọ nwekwara ụdị 128GB yana ụdị abụọ (nke ọzọ bụ 64GB) nwere oghere kaadị microSD ruo ikike 512GB.
Igwefoto foto onwe onye na Y9 Prime (2019) bụ ihe mmetụta 16 MPmgbe ese foto n'azụ, nke bụ 16 MP + 2 MP sọrọ igwefoto sensọ, tinye 8 MP ultra-wide lens iji mee okpukpu atọ igwefoto ntọala. N'aka nke ya, enwere ọtụtụ ihe igwefoto gụnyere eserese eserese nke 3D (maka igwefoto n'ihu na azụ) na njirimara AI.
N'aka nke ọzọ, ngwaọrụ ahụ nwere batrị mAh 4,000 nke ebubo site na ọdụ ụgbọ USB Type-C. Enwere akara nyocha mkpịsị aka na azụ nke ngwaọrụ ahụ, mana enweghị nkwado maka njikọ NFC. Ekwentị na-agba ọsọ EMUI 9.0 dabere na A gam akporo ma bia na Midnight Black, Emerald Green na Sapphire Blue.
N'ikpeazụ, Huawei ekwupụtabeghị na nnweta na ọnụahịa nke Huawei Y9 Prime (2019). Agbanyeghị, anyị chọsiri ike ịma ma ọ bụrụ na ị dị njikere itinye ntakịrị ihe na ọnụahịa nke P Smart Z, nke bụ 279 euro, n'ihi igwefoto ọzọ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Kpughere atụmatụ niile nke Huawei Y9 Prime (2019) site na otu ụlọ ọrụ ahụ
Ọ bara uru ịzụta Google Pixel 3a?
OnePlus kwadoro nkọwapụta ihuenyo nke OnePlus 7 Pro